Resipe-tsiranoka miaraka amin'ny legioma ao amin'ny Thermomix, manankarena sy mora | ThermoRecipes
Verduras50 minitraOlona 4170 kaloria
Na mafana toy inona aza, sarotra ny miteny tsia amin'ny sasany Voanjo miaraka amin'ny legioma vita amin'ny Thermomix.
Izy io dia lovia manankarena amin'ny vy sy vitamina izay tian'ny fianakaviana manontolo noho izany Tsiro malefaka.
Ary faharoa ... ahoana ny sasany meatballs zaridaina manao ahoana ianao? Mazotoa homana!
1 Voanjo miaraka amin'ny legioma
Miaraka amin'ny Thermomix dia hanana fotoana fohy isika ary tsy mila ezaka lentila matsiro miaraka amin'ny legioma, malefaka sy tonga lafatra ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
250 g ny voanio volontsôkôlà
Paprika 1 sotrokely avy any La Vera
Karaoty 2 voadidy ho silaka
Ovy antonony 2 nohamarinina
Rano 780 g
Mandrotsaka ny lentilasy farafahakeliny 2 ora alohan'ny handrahoana azy ireo.
Aorian'ireo 2 ora ireo dia esorintsika izy ireo ary hosasana.
Apetrakay ao anaty vera ny tongolo, tongolo lay ary menaka. Izahay dia manao fandaharana 4 segondra, hafainganam-pandeha 4. Miaraka amin'ny spatula isika dia mampidina ny sisa tavela izay mety nijanona teo amin'ny rindrin'ny vera. Izahay izao dia mandahatra 6 minitra, maripana varoma, hafainganana 1. Manokatra ny sarony izahay ary manampy ny paprika (mila mitandrina isika mba hianjera amin'ny fototr'ilay vera fa tsy amin'ny lelany) ary fandaharana 1 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Arotsaho izao ny lentilika voasasa sy nalatsaka, ny karaoty karaoty, ny cubes ovy, ny ravina bay, ny rano ary ny sira. Izahay dia manao fandaharana 30 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganam-pandrefesana.
Raha tsy manompo azy ireo eo noho eo isika dia hihalehibe. Afaka manampy rano kely foana isika rehefa manafana azy ireo indray.
Ireo lentila ireo ihany dia azo amboarina amin'ny puree matsiro. Mila esorina fotsiny ny ravina bay sy ny programa, farafahakeliny 1 minitra, amin'ny hafainganana 10.
Raha tianao ny sasany lentil miaraka amin'ny chorizo ​​ao amin'ny Thermomix, ampidiro ny rohy izay navelanay fotsiny. Fomba mahazatra hafa handrahoana ireto legume ireto ary raha manan-janaka ianao dia mety ho tian'izy ireo kokoa.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: legioma, Menu isan-kerinandro, Vegan, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » legioma » Voanjo miaraka amin'ny legioma
Eto ianao dia mametraka:
Arotsaho izao ny lentilika voasasa sy nalatsaka, ny karaoty karaoty, ny cubes ovy, ny ravina bay, ny rano ary ny sira. Mandritra ny 30 minitra izahay dia manao fandaharana, fihodinana havia, hafainganam-pandehanan'ny sotro.
Tsy manana mari-pana izy ireo ????
Misaotra tamin'ny tendrony, Lorena. Efa voahitsy.
Manantena aho fa maniry lentil ianao 😉
Salama!! Mpihinana firy izy ireo? Tiako ny mandray ny resinao isan'andro. Misaotra anao
Misaotra tsara! Tianay ny manoratra aminay.
Holazaiko ho an'ny servisy mahazatra 4. Ao an-trano dia misy 5 izahay (olon-dehibe 2 ary zaza 3) ary matetika tsy misy mihoampampana.
Napetrako tao anaty resipeo io izao.
Salama! Amin'izany habetsaky ny rano izany ve lasopy sa matevina? Ny esq tiako dia matevina ry zareo !!
Salama Mari Carmen,
Raha tianao izy ireo matevina, vita indray, avelao izy ireo hiala sasatra mandritra ny minitra vitsy ao anaty vera.
azo atao amin'ny lentilasy vilany ve izy io? misaotra betsaka 🙂
Azo atao izany saingy fomba hafa no hanamboarana azy satria ny ora sy ny habetsaky ny rano tsy maintsy novaina ... Voalohany dia tsy maintsy masaka ny legioma avy eo ampiana lentilisa. Ary tsy nasiako rano be loatra satria ilay fariparitako ao anaty resipeo no tena ilain'ireo lentil mahandro.
Horaisiko ny hevitrao hanamboarana fomba fahandro lentil !! 😉
Jaquelin arreaga dia hoy izy:
Te hianatra hampiasa ny thermomix aho, tsy ampiasaina amin'ny koba pizza ihany.
Mamaly an'i Jaquelin arreaga
Mila amboarina izany! Topazo maso isan'andro ny pejinay fa hanome anao hevitra be dia be izahay mba hahazoana tombony azo avy amin'ny Thermomix anao. Ary aza misalasala manontany anay izay fanontaniana mety hitranga.
Miakatra… !! Mahatalanjona ny lentil, indrindra ho an'ireo tsy mihinan-kena, tiako ny tsiro malefaka sy manankarena ao aminy. Nampahatsiahy ahy ny momba ny reniko izy ireo. Nampanan-karena azy ireo tamina calabácin sy koba legioma iray koba aho, ary matoa aho efa nampiasa lentil efa masaka tamin'ny tavoara vera, satria rano 600g fotsiny no nasiako ary nahandro 25 minitra, tao anatin'ny 5 minitra farany dia nasiako ilay tatatra lentilisa. Nivoaka tsara ry zareo !! Ireo izay tavela tamin'ny servings roa, notorotoroiko nandritra ny 1 minitra tamin'ny hafainganam-pandeha 5-10 ary tavela miaraka amina crème lentil mahafinaritra aho, manan-karena kokoa noho ny lentil, tsy misy fromazy na zavatra hafa, toa izany koa nivoaka ny servings. Safidy tsara inona ny lovia roa! Misaotra anao!!
Tsara izany fampifanarahana amin'ny lentilisy efa masaka izany. Miarahaba anao ary misaotra anao nilaza taminay.
Matetika kobaiko ihany koa ny ambiny (rehefa ambiny izy ireo) ary noho izany dia voavaha ny sakafo hariva ny ampitso. Rehefa mihalehibe izy dia maivana amin'ny ronono aho ary ampiarahiko amin'ny voanio.
Sunako dia hoy izy:
Salama! Nataoko ny recette ary tena tiako ilay izy, saingy tiako ho fantatra raha azoko atao ny manova azy ho lovia tokana amin'ny fampidirana tratra akoho voatetika. Amin'ny firy no tokony ampiako azy mba tsy ho ratsy ny hena?
Valiny tamin'i Sunako
Hevitra tsara momba ny akoho! Apetrako rehefa manampy trondro izahay, mba hiara-mahandro amin'izy ireo sy ny legioma.
Lazao amiko ny fijeriny anao.
Ayyy nofinofy fotsiny ny navalinao ahy! Misaotra !! Hiezaka an'ity fomba ity aho hahitako ny fomba fiasa. Ny fanontaniako dia hoe raha misy rano na miaraka amin'ny saosy. Rehefa manao aho dia holazaiko anao eto izany.
Amin'ny alalàn'ny ananako ny bokinao, fanomezana Krismasy avy amin'ny ray aman-dreniko tamin'ny taon-dasa, dia niaraka tamiko tao anaty valiziko hatramin'ny nipetrahako tany ivelany.
Mivoaka koa ve ianao? Ains, manao ahoana ny hasarotry ny fiainana an-tany hafa, sa tsy izany? hehehe 😉
Tena faly aho amin'ilay boky! Manantena aho fa tianao izany.
Eny, mipetraka eto Frantsa aho mandritra ny telo taona izao, fantatrao fa "mianatra dia ho lasa lavitra ianao" satria nandeha 2000 km miala ny tranoko aho lol.
Mahafinaritra ny boky, manao recette tsikelikely aho, misy maro!
Mahafinaritra anao ny fitiavanao ilay boky.
Tsy isalasalana fa ny fiainana any ivelany dia efa za-draharaha, ankafizo! 😉
Salama, raha toa ka tsy nasianao paprika dia asiana curry vovoka dia matsiro be koa izy ireo.
Hiezaka ny kari aho, toa sosokevitra tsara 😉
Tiako ity fomba fahandro ity ho an'ny lentil, alohan'ny ananana ny thermomiX na mivoaka be ranoka izy ireo na tsy misy ron-kena na tsy masaka na regimen, miaraka amin'ity resipeo ity dia mihalehibe aho ary mihinana ireo mpikambana 4 ao amin'ny fianakaviako ary tian'izy rehetra izany. Misaotra anao.
Fifaliana inona no omenao ahy 🙂 Misaotra betsaka anao, Susana !!
Ny voasarimakirana dia nanjary ratsy be ho ahy tao Thermomix, saingy noho io fomba fahandro io dia matsiro izy ireo.
Tsara Marisol !! Misaotra anao nilaza taminay 🙂
Ankehitriny fa mbola mangatsiaka dia mifankasitraka izy ireo, dia matsiro
Inona no antony Yolanda anao. Misaotra!
Salama! Miraikitra amin'ny resipeonao aho, isan'andro dia manao iray hafa aho ary mandresy foana! Fa raha ny lentil no resahina, dia manana fanontaniana lehibe foana aho: ny habetsaky ny lentil dia manondro mialoha na aorian'ny fanotofana? Misaotra sy miarahaba.
Valiny tamin'i Lara
Tena tsara Lara! Tianay ny mamaky izay lazainao anay 😉
Raha ny momba ny lentil dia manondro ny lanjany foana alohan'ny handemana azy.
Misaotra betsaka anao !!
Martin Gonzalez dia hoy izy:
Tena nanan-karena aho, nomaniko izy ireo ho entina hiasa.
Valiny tamin'i Martin Gonzalez
Salama miaraka amin'ny lentil faingana dia hitovy ve ny fotoanan'ny fandrahoana?
Izay raha ny faminaniako azy. Ajanony indraindray anefa ilay masinina hijerena sao tsy miraraka izy ireo.
5 taona taorian'ny nampakaranao ny recette ary mitovy ny fahombiazany tamin'ny andro voalohany !!! Androany aho dia nanampy zucchini ary faly izahay !!!
Misaotra betsaka, Yolanda !! Mahafinaritra ny mamaky hevitra toa anao 🙂
Ahoana raha avelanao mihoatra ny 2 ora izy ireo aorian'izany?
Valiny amin'i PATRICIA
Tsy maninona, Patricia. Roa ora anefa dia ampy.
Te-hanao ny resipeo aho fa te-hanova azy. Voalohany dia te-endasina ny hoka, tongolo ary tongolo lay. Manaraka, endasina dipoavatra, karaoty, voatabia sy bay bay. Farany, nampiana ovy, tsaramaso ary lentila aho. Saingy ... inona ny fotoam-pahandroana sy ny maripana amin'ny tranga rehetra?
Ho an'ny fikororohana voalohany dia azonao atao ny manamboatra programa 100 ° (na 120 amin'ny TM5), 4 minitra, hafainganam-pandeha 1. Rehefa manampy dipoavatra ianao, karaoty ... dia hametraka ny mari-pana sy ny hafainganam-pandehako mandritra ny 7 minitra ary tsy misy hantsana . Aza adino ny menaka amin'ny dingana voalohany! Vantany vao apetrakao ny lentil dia araho ireo dingana voalaza ao amin'ny resipeo (30 min, 100 °, fihodinanan'ny havia, hafainganam-pandeha sotro).
Lazao anay hoe nanao ahoana izy ireo.
Yorby dia hoy izy:
Ohatrinona ny sira?
Mamaly an'i Yorby
Salama Yorby. Ilay heverinao ... manomboka kely ary ampio bebe kokoa mandra-pahatonganao ny teboka mety indrindra.
Salama! Vao avy nanao ireo lentilasy ireo aho noho ny sakafoko ary tena tsara mivoaka. Fanovana vitsivitsy nataoko… nasiako voatabia voatoto handrahoana azy amin'ny tongolo sy tongolo lay, ary mamela tsiro tsara. Tsy nametraka ovy aho ary tsy tonga nanadino ny chorizo ​​na ham. Rano kely kokoa sy sira kely kely iray hafa isaky ny olona.
Lovia tena tsara. Misaotra anao nanolotra fomba fahandro sy tolo-kevitra marobe.
Herma dia hoy izy:
Salama!!! Nataoko io fomba fahandro io androany ary raha mbola manta izy ireo dia apetrako indroa isaky ny ora, chorizo ​​nohetezana miaraka amin'ny lentil sy takelaka misy ron-kena ary tena matsiro.
Valio amin'i Herma
Salama, Herma! Eto ny karazana lentil dia misy ifandraisany betsaka amin'izany. Faly aho fa nahavaha izany tamin'ny fandaharanao fotoana bebe kokoa. Chorizo ​​dia mpiara-miasa tsara amin'ity legume ity 🙂